Ofisialy ankehitriny: Taonan-doza Ho an’i Japana ny Taona 2018 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2018 16:19 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, Français, Español, 繁體中文, عربي, Italiano, ਪੰਜਾਬੀ, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny 19 Desambra 2018)
Voatondro ho kanji tena maneho tsara ny taona 2018 ho an'i Japana ny endri-tsoratra sinoa (kanji) ”wazawai” na ”sai” (災). Aseho isantaona ao amin'ny Tempoly ara-tantara Kiyomizu ao Kyoto ny kanji. Pikantsarin’ ny fantsona YouTube ofisialin'ny fampahalalam-baovaon'ny ANN.
Taorian'ny taona feno horohorontany, ora-nikija, tondradrano, rivo-doza ary hafanana migaingaina, voatendry ho kanji ho an'ny taona 2018 ao Japana ny endri-tsoratra sinoa midika hoe ‘loza’ ( 災: “wazawai” ou “sai”). Fantatra amin'ny anarana hoe kanji (漢字) ny endri-tsoratra sinoa ao Japana.
Nosafidian'ny Japanese Kanji Proficiency Society (Orinasa Japoney Mpahay Kanji) ny kanji tamin'ity taona ity araka ny vokatry ny fanadihadiana nasionaly natao tany am-pianohan'ny fararano. Tamin'ireo fisoratana anarana 193 214 voaray nanerana an'i Japana, ny ”wazawai” no nahazo ny isa ambony indrindra tamin'ny vato, izany hoe 20 858.
Nandritra ny taona 2018 iray manontolo, niaritra andiana kibay maro i Japana, indrindra fa :
Firotsahana orampanala be izay tena nampihitsoka ireo tanàna rehetra manerana ny morontsirak'i Japana efa ho herinandro teo ho eo
Horohorontany tamin'ny volana Jona izay tena nanimba be ireo faritra maro tao Osaka sy ireo tanàna manodidina azy
Tondradrano faobe nahafaty tamin'ny volana Jolay taorian'ny nahazoan'ny faritra maro tao andrefan'i Japana rotsakora-mikija be izay tena naharesy ireo fatra be indrindra teo amin'ny tantara.
Hafanana tsy nisy ohatr'izany izay niteraka fahafatesana maro nandritra ny ampahany lehibe indrindra tamin'ny fahavaratra
Horohorontany iray hafa indray tamin'ny volana Septambra, tamin'ity indray mitoraka ity tany Atsimon'i Hokkaido, izay namela olona an-tapitrisany maro tsy nisy herinaratra nandritra ny andro telo teo ho eo ary nanakorontana ny toekarenan'ny nosy.
Ny rivodoza mahery indrindra tao anatin'ny 25 taona, izay nanitsoka ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Osaka nandritra ny herinandro teo.
Tao anatin'ny famoahana an-gazety, nanazava ny Japanese Kanji Proficiency Society, miorina ao Kyoto, fa marika nifanaraka tsara tamin'ny taona 2018 ho an'i Japana ny hoe ”loza”, ity kanji ity izay nandona ny fiainan'ny olona tamin'ny endriny maro samihafa:
Satria manerana an'i Japana , tsy nisy nahafantatra ny olona hoe rahoviana no mety hitrangan'ny loza iray (災害), nitombo ny isan'ireo olona nanapa-kevitra ny handray ny andraikiny manokana tamin'ny fiomanana amin'ireo loza (防災). Ary satria tsy nisy afaka ny hanadino ireo loza nanjo an'i Japana, taona iray nanirian'ny olona maro hahafantatra bebe kokoa momba izay fomba fampihenana ny fiantraikan'ireo loza voajanahary ity taona ity. (減災).
Isaky ny volana Desambra, nambara tao amin'ny Kiyomizu-dera, tempoly sy toeran'ny vakoka iraisampirenena tantanin'ny UNESCO ao Kyoto, izay natsangana efa 1300 taona izay, ny Kanji an'ny Taona. Manambara ihany koa ny kanji-n'ny taona amin'ny fanoratana izany amin'ny sorakaliana nentim-paharazana, toy ny hita ao anatin'ity lahatsarin'ny fetibe tamin'ny 2018 ity, ny Reverà Mori Seihan, pretra lehibe ao amin'ilay tempoly:
Raha toa ka miomana amin'ny fanonganantenan'ny amperorany ankehitriny amin'ny volana Mey 2019 i Japana, izay mamarana ny vanim-potoana Heisei raha toa ka mikisaka hankany amin'ny amperora vaovao izy, ny ”hei”(平) no litera sinoa faharoa nalaza indrindra tao anatin'ilay fanadihadiana tamin'ity taona ity. Ny ”Hei” dia iray amin'ireo kanji roa mamorona ny teny hoe ”Heisei” (平成), anaran'ny fitondran'ny amperora amin'izao fotoana izao ao Japana, izay fantatra amin'ny ankapobeny manerana ny tany amin'ny anarana hoe Akihito :
Raha toa ka “wazawai” no teny nalaza indrindra, ”hei” kosa no faharoa, manamarina ny mpaneho hevitra sasany fa faran'ny vanim-potoana Heisei (平成) tany Japana izany. Ho an'ny maro hafa, ny Lalao Olaimpika 2018 tany PyeongChang (soratana 平昌 amin'ny teny japoney), sy ny fihaonana an-tampony teo amin'i Amerika sy Korea tamin'ny 2018 izay nikendry ny fandriampahalemana (平和) no tranga tsara tamin'ity taona ity. Antenaintsika ny taona ho avy mba ho taona tsara hahafahana misafidy kanji tsara sy mamiratra.